Awuqiniswe umkhankaso wokugoma kodwa izinkampani azingaphuli uMthethosisekelo ngesidingo somgomo weCOVID-19. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Nokho lokho akumele kwenziwe ngendlela ezophambana noMthethosisekelo.
Usho kanje umfelandawonye wezinyunyana iCosatu nenhlangano yamakhomanisi iSACP. Bebephawula njengoba ngesonto elidlule enye yezinkampani ezinkulu eNingizimu Afrika nehweba eJSE iDiscovery imemezele ukuthi kusukela mhla ka-1 ngoJanuwari ngonyaka ozayo izokwethula umgomo ozophoqa ukuthi zonke izisebenzi zayo zigome.
UMnu u-Adrian Gore, isikhulu esiphezulu sale nkampani, uthe izoba khona indlela yokuthi abafisa ukungawuthathi lo mgomo bakwenze lokho.
Uthe bamatasa namalungiselelo okwethula lo mgomo. I-Discovery yinkampani ehlinzeka ngemali njengoba inophiko lomshwalense kanti isanda kwethula nebhange. Iphinde ibe yinkampani ehlinzeka ngomshwalense wezempilo, i-medical aid.
UMnu u-Adrian Gore, isikhulu esiphezulu seDiscovery
Okhulumela iCosatu, uMnu uSizwe Pamla, uthe kuyinto enhle ukugqugquzela izisebenzi ukuthi zigome futhi nabo bayawakhuthaza amalungu abo ukuthi agome.
“Kuhle futhi ukuthi izinkampani zilekelele ekulweni nokusabalala kwamampunge ngomgomo. Kodwa asikweseki ukuthi lokho kwenziwe ngokuthi izisebenzi ziphoqwe futhi zisatshiswe.
“Izinkampani azibona abanikazi bezisebenzi. ENingizimu Afrika siyizwe elibuswa ngentando yabantu futhi sinoMthethosisekelo esavumelana ngawo. Ngisho ngabe kuthiwa abanye abantu banemibono exakile, inqobo nje uma bengaphuli umthetho futhi bengahlukumezi ilungelo labanye abantu, siyakwamukela loko,” kwengeza yena.
Uthe nakuba kwaziwa ukuthi aphezulu amathuba okuthi abantu bagule ngenxa yokuthi kunobhubhane kodwa akusho ukuthi umuntu ongagomile uyagula.
UMnu uSipho Pamla weCosatu
UDkt u-Alex Mashilo, okhulumela iSACP, uvumelene noPamla. Uthe kumqoka ukunyusa igiya ekugqugquzeleni abantu ukuthi bagome ngoba kucacile ukuthi ngale kwaloko zizokwanda izinkinga zeNingizimu Afrika.
“Sibala umnotho ongavuseleleki futhi ongakhuli nezinkinga ezihambisana naloko njengokunyuka kwesibalo sabantu abangasebenzi, ububha, ukungalingani nokungakwazi ukuzondla.
“Nokho kumqoka ukuthi wonke umuntu, neDiscovery, ahloniphe amalungelo ezisebenzi njengokusho koMthethosisekelo nawabanye abantu,” kusho yena.
UDkt u-Alex Mashilo weSACP
Ngenkathi kuqala kushiwo ukuthi kuzokwethula umgomo weCOVID-19 uMengameli uCyril Ramaphosa wathi akekho umuntu ozophoqwa ukuthi agome. IKhomishini yamaLungelo abaNtu ikugcizelele loku njengoba ithe izinkampani ezizophoqa izisebenzi ukuthi zigome zizobe ziphula amalungelo abantu.
Ungoti womthetho, uMnu uMpumelelo Zikalala, uthe kuyiqiniso ukuthi akekho umuntu ongaphoqwa ngoba uMthethosisekelo awukuvumi loku njengoba kudingeka ukuthi umuntu avume uma kufanele alashwe ngandlela thize.
“Kodwa kungenzeka kube khona izimo ezingagcina sezikuphoqile ukuthi ugome, kuye nokuthi yini ofuna ukuyenza ngempilo yakho, usebenza kuphi, lapho usebenza khona bangaki abantu othintana nabo. Kanjalo nokuthi ithini inkontileka owayisayina nokuthi angakanani amalungu omphakathi oxhumana nawo njalo ngosuku,” kusho yena.
UZikalala uthe kuhle kukhunjulwe ukuthi uMthethosisekelo awusho ukuthi abantu banamalungelo awudede njengoba kukhona lokhu okuthiwa ngama-limitation.
UMnu uMpumelelo Zikalala weMpumelelo Zikalala Attorneys
“Uma singenza isibonelo ngezingane, zincane kabi izikole ezivuma ukubhalisa izingane ezingayigomelile imigomo edingwa yizingane uma zikhula njengowesimungumungwane no(wovendle).
“Yebo, ilungelo lakho lokuthi ungagomi likhona kodwa ungathola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kukhona izinto ongeke ukwazi ukuzithola ngoba kunabantu abazothi uma ungagomile kunezinto abangeke bakuvumele uzenze njengokungena endaweni yokudlela noma ukuhambela izwe elithize,” kuchaza yena.
Ukuze kufinyelelwe lapho kuzothathwa ngokuthi sekugonywe khona abantu abenele, phecelezi i-herd immunity, kumele kugonywe abantu abawu-41 million ezweni. Ngokwezibalo zeSAcoronavirus.co.za, bawu-7 million abantu asebegomile kusukela luqalile lolu hlelo.